Ireo manamboninahitra TSA dia mahita basy lava feno entana ao anaty seranam-piaramanidina El Paso
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Ireo manamboninahitra TSA dia mahita basy lava feno entana ao anaty seranam-piaramanidina El Paso
Nandritra ny iray volana dia nahita basy 6 tao anaty kitapo entin'ny mpandeha tao amin'ny toeram-pisavana tao El Paso ireo tompon'andraikitra misahana ny fitaterana ny fitaterana.
Masinina nita taratra tamin'ny masinin-tseran-tsambo.
Ny famonosana basy tsy voaroaka miaraka amina bala azo alefa any amin'ny toeram-pisavana dia mitondra sazy sivily sy onitra mitovy amin'ny fitondrana basy vita amin'ny entana.
Amin'ny tranga rehetra dia nampandrenesina ny polisy ary nampangaina ho mpandeha ny mety ho mpandeha.
Ireo basy vita tanana dia hita tao amin'ny seranam-piaramanidina El Paso nandritra ny tranga 6 hafa nanomboka ny vanim-potoana 19 Febroary hatramin'ny 26 martsa 2021. Ireo basy rehetra dia fenoina afa-tsy iray.
Ny masinina maso X-ray no nahamarika ireo fitaovam-piadiana ireo, ary tamin'ny tranga rehetra dia nampandrenesina ny polisy El Paso. Ireo izay ho tonga dia voatonona tamin'ny fiampangana fitaovam-piadiana. Tsy misy na inona na inona manondro ireo tranga ireo fa mifandray amin'ny fomba rehetra.
Manerana ny firenena dia nahita basy 1,006 86 ny mpiandraikitra ny TSA ary 2020 isan-jaton'ireo no efa voatafika. Tamin'ny taona 3,257, basy XNUMX no totalim-basy hita teny amin'ny seranam-piaramanidina manerana ny firenena.
Tsy azo entina amin'ny fiaramanidina ara-barotra ny basy raha tsy alefa izy ireo, atondrina anaty boaty mihidy mafy sy mafy ary apetraka ao anaty valizy voamarina. Avy eo izy ireo dia mila mitondra ny raharaha any amin'ny kaontera tapakilan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka mba hanambara ny basy, bala, ary ny faritra misy ny basy.
Ny ampahany amin'ny bala sy basy, ao anatin'izany ny basy, mpandray, rakitsary ary magazine dia voarara ihany koa ao anaty entana ary tsy maintsy arahana. Ny basy replika dia voarara ihany koa ao anaty entana ary tsy maintsy entina anaty valizy voamarina.
Araka ny Tranonkala TSA, mitondra basy tsy voaroaka miaraka amina bala azo alefa any amin'ny toeram-pisavana dia mitondra sazy / sazy sivily mitovy amin'ny fitondrana basy feno entana any amin'ny toeram-pisavana.
Alohan'ny fivezivezena dia amporisihina ireo mpandeha mba hanara-maso ny lalàna sy ny lalàna mifehy ny basy any amin'ny toerana alehany mba hahazoana antoka fa manara-dalàna izy ireo. TSA dia manolo-kevitra ihany koa ny mpitsangatsangana hanamarina ny kaompaniam-piaramanidina alohan'ny sidiny mba hahazoana antoka fa manaraka ny fepetra takiana amin'ny sidina manokana.
Nanangana mpanamory fiaramanidina vaovao 300 ny United Airlines rehefa miverina izy ireo